I-china Outdoor Illuminated Led Front Shop Lighting Signbord abakhiqizi nabaphakeli | UZhengcheng
Ibhokisi eligcwele eligcwele lisebenzisa amandla, futhi imishini yalo yokukhanyisa eyakhelwe ngaphakathi ilimala kalula. Izinhlamvu ezikhanyayo eziholelekile azibonakali ebusuku, futhi abalingiswa abakhanyayo bathambekele ekukhanyeni amabala.
Ama-signboards wesiko enziwa kakhulu ngengqikithi, futhi ukugcinwa kudinga ubuchwepheshe obuqinile, futhi izindleko zesondlo ziphakeme, noma akunakwenzeka ukuzilungisa, okuholela ezindlekweni zokusebenzisa eziphakeme.
Umsebenzi wokulungisa ulukhuni kakhulu, ngakho-ke ngemuva kwesikhathi sewaranti, abakhiqizi abazimisele ukulungisa izimpawu.
Izinkinga esibhekane nazo
1. Ibhokisi lokukhanya likaZhengcheng lenziwe ngephepha le-acrylic, kusetshenziswa ithubhu yesibani enelungelo lobunikazi, ukukhanya okuphezulu, ithubhu yesibani se-LED esetshenziswa ngebhokisi lokukhanya le-acrylic, ukudluliswa okuhle kokukhanya, ukukhanya okufanayo.
2. Ibhokisi lokukhanya likaZhengcheng lamukela ukwakheka okuyisimo, futhi ibhokisi elilodwa lokukhanya lifakwe ithubhu ehlukile ye-LED, elula ukuyigcina futhi inciphise izindleko zokuyigcina.
3. Inqubo yendabuko yokulungiswa kwamabhodi ayinkimbinkimbi, futhi abakhiqizi abaningi bamabhodi abazimisele ukulungisa ibhodi lesibonakaliso, kodwa ibhokisi elikhanyayo likaZhengcheng lilula ukulilungisa, futhi ibhodi elonakalisiwe lingabhekelelwa ngesikhathi.
Izitolo eziningi ezilula nezitolo ezinkulu zikhetha ukuvula izitolo ezimpambanweni zomgwaqo, kepha ukwakheka kwezimpawu kuyinkinga enkulu. Izimpawu zangaphambili zesitolo sikaZhengcheng zihlukaniswe ngamabhokisi amaningi alula ukubhekana nenkinga yokugobeka. Ngasikhathi sinye, isibani se-LED sinokukhanya okuphezulu. Iheha kakhulu futhi inhle ebusuku.
Langaphambilini Izimpawu zokukhangisa ze-acrylic ezingaphandle kwamanzi
Olandelayo: Kwafakwa i-acrylic signboard yangaphandle yesitolo esikahle se-wowo
Kwaholela Ukukhanyisa Board
I-Pharmacy Signboard, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, I-Blister Light Box Signboard, Izimpawu Ezikhanyisiwe, Izimpawu Zokukhangisa, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso,